နေတိုးအဖွဲ့ချုပ် ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ သတင်းဓါတ်ပုံများ
04 စက်တင်ဘာ၊ 2014
ဗိတိန်နိုင်ငံ ဝေလနယ်မှာ ဒီကနေ့ စတင်တဲ့ မြောက်အန္တလန်တိတ် စစ်စာချုပ်အဖွဲ့ နေတိုးရဲ့ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲကို ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ စုဝေး တက်ရောက်နေကြသလို၊ ယူကရိန်းနိုင်ငံ ပဋိပက္ခနဲ့ ဆီးရီးယား နဲ့ အီရတ်နိုင်ငံတွေမှာ အစ္စလာမ်မစ်အစွန်းရောက် အဖွဲ့တွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု အန္တရာယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဓိက ဆွေးနွေးကြဖို့ ရှိနေပါတယ်။ နေတိုး မဟာမိတ်အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးချုပ် Anders Fogh Rasmussen က ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင်း အပစ်အခတ် ရပ်စဲမှုရရှိရေးအတွက် ရုရှား သမ္မတ ဗလာဒီမီယာ ပူတင် တင်သွင်းတဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သူ့အနေနဲ့ သံသယရှိကြောင်းကို ဆွေးနွေးပွဲအဖွင့်မှာပဲ ပြောသွားပါတယ်
1 French President Francois Hollande, Ukraine President Petro Poroshenko, U.S. President Barack Obama, British Prime Minister David Cameron, German Chancellor Angela Merkel and Italian Prime Minister Matteo Renzi meet on the situation in Ukraine.
2 NATO Secretary-General Anders Fogh Rasmussen speaks to the media at the Celtic Manor resort, near Newport, in Wales, Sept. 4, 2014.
3 Military personnel wait outside as leaders from the U.S., France, Italy, Germany, the United Kingdom and Ukraine participate inameeting on the situation in Ukraine at the NATO Summit at the Celtic Manor Resort in Newport, Wales, Sept. 4, 2014.
4 U.S. President Barack Obama joins British Prime Minister David Cameron duringavisit to Mount Pleasant Primary School in Newport, Wales, Sept. 4, 2014.